Miaramila - AOOD Technology Limited
Ny peratra slip an'ny AOOD dia notompoina ho miaramila nandritra ny taona maro, natao ho an'ny tontolo henjana sy fitakiana mitaky izany izy ireo. Miaraka amin'ny filan'ny mpanjifa mitaky fitakiana tariby avo lenta an'ny pirinty miaramila, ny manam-pahaizana AOOD dia nanamboatra teknolojia gel vaovao hatrany, ahafahan'ny peratra kapaoty AOOD manatanteraka asa fampitana amin'ny rafitra miaramila sarotra indrindra. Ohatra, ny radar fanaraha-maso dia miasa 24h / 7 andro isan-kerinandro, mila tariby misy tariby zato mahery izy ao anatin'izany ny fantsom-pifandraisana avo lenta, fantsom-pifandraisana Ethernet haingana, signal RF ary signal optic fibre, ny manam-pahaizana AOOD dia mandray endrika maodely.
fitambaran'ny peratra slip elektrika miaraka amin'ny RF sy ny fibre rotary optika, ny fiarovan'i EMC hiantohana ny famatsiana herinaratra, angon-drakitra haingam-pandeha ary ny fampitana signal RF radio. Ho fanampin'izany, AOOD dia afaka mampifangaro azy amin'ny tsiranoka rotary sy ny encoder.
Fampiharana mahazatra ao anatin'izany:
● Toeram-piadiana milamina sy voafehy lavitra
● Fiara mifono vy, satroka basy mifono vy ary satroka tanky
● Rafitra mitam-piadiana milamina, IFF fehezin'ny laser, rafitra ahazoana tanjona ary rafitra fanaraha-maso afo
● zavamaneno sy gyroscope avionaly gimballed
● Toeram-basy miorina amin'ny rivotra sy fahitana
● Rafitra Infra-mena mandroso ary rafitra elektro-optika
● Fiaramanidina fiaramanidina elatra sy helikoptera ho an'ny rafitra mpivezivezy sy rotor
Vokatra mifandraika: Aerospace / Rantsan-tafika miaramila, Capsule miady amin'ny kapsily miaramila, Taratra fitetezana radara, Finger optic hybrid slip pirinty